जनावरहरुबीचको मित्रता जति अनौठो हुन्छ, उति नै रोचक लाग्छ - बडिमालिका खबर
साेमबार, असार १, २०७७
कुकुर घोडा चढेको, हाँसको बचेरोले बिरालोलाई पछ्याउँदै खेलेको र मुसा प्रजातिको पाल्तु ह्याम्स्टरले सर्पलाई खेद्दै जिस्किएका भिडियोहरु तपाईंले सोसल मिडियामा प्रसस्तै देख्नुभएको छ होला ।
हामी विभिन्न खाले जनावरहरुबीच हुने मित्रताका कथा कहानीहरुबाट निकै रोमाञ्चित हुन्छौँ । जनावरहरुबीचको मित्रता जति अनौठो हुन्छ, उति नै रोचक लाग्छ हामीलाई ।
तर केही जनावरहरुको मित्रता यति अपत्यारिलो तथा कल्पनै गर्न नसकिने खालको हुन्छ कि कहिलेकाहीँ त्यो आत्मघाती जस्तो प्रतित हुन्छ ।
यस्तो हुनु केवल प्रकृतिको विचित्रता हो वा यसका पछाडि केही वैज्ञानिक कारण पनि हुन्छ ?
बच्चाको पालन पोषण
कार्डिनल प्रजातिको चाराले रोबिन चराका बचेराको लालन पालन गर्दछ । अन्य केही चराहरुमा पनि अर्कैका बच्चा पालिदिने प्रवृत्ति देखिन्छ ।
सन् २००९ मा अमेरिकाको साउथ क्यारोलिनामा एउटा अनौठो घटना भयो । त्यहाँको वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्रमा आँधीबेहेरीका बखत जन्मिएका सेतो बाघका दुईवटा डमरु मित्रा र शिवा आफ्नो आमाबाट विछोडिए । त्यसरी बिछोडिएका डमरुहरुलाई जब संरक्षण केन्द्रको चिडियाघरमा सारियो तब त्यहाँ रहेको अन्जना नामको दुई वर्षीय चिम्पान्जीले ती डमरुहरुको रेखदेख तथा हेरचाह गर्न थाल्यो ।
बेलायतको समरसेटस्थित संरक्षित वनक्षेत्रमा दुई फरक प्रजातिका जीवहरु अटर र बाडगरका अनाथ बच्चाहरु ब्रुक र बम्बल बी बीचको असामान्य दोस्ती पनि निकै चर्चित भयो ।
त्यस्तै अमेरिकाको मोन्टानामा एउटा सिंहको पोथीले आफुले सिकार गर्ने जनावर स्कुंकको बच्चालाई आफ्नो डमरुसँगै हुर्काएको घटना पनि कम चर्चामा रहेन ।
यसले के बताउँदछ भने बच्चा जनावर र बच्चा हुर्काउने आमाबीच यस्तो प्राकृतिक सम्बन्ध स्थापित हुन्छ जसले सिकारी जनावरको सीमालाई पनि तोड्दछ । बच्चालाई संरक्षण गर्ने र हुर्काउने जन्मजात गुणले जिवहरुबीचको प्राकृतिक भिन्नतालाई पनि माथ दिन्छ र सिकारी जिवको स्वभाविक प्राकृतिक चरित्र पनि दबाइदिन्छ ।
गधा र कुकुर सबैभन्दा असल साथी बन्न सक्दछन् भन्ने कुरा कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ ।
फ्लोरिडास्थित एक वन्यजन्तु संरक्षण केन्द्रमा बी नामको जिराफलाई त्यस्तो ठाउँमा राखियो जहाँ विल्मा नामको सुतुरमुर्ग चरा बस्दथ्यो ।
सबैको अनुमान थियो कि यी दुई जनावरहरु एक अर्काबाट टाढै रहनेछन् । तर सबैलाई चक्मा दिँदै जिराफ र सुतुरमुर्ग साथी बने र सँगै रहन थाले ।
अमेरिकाकै सानडिएगो चिडियाखानामा एउटा टिम्बर भेँडा र दुईवटा बाख्राहरुबीच दोस्ती भयो । दुई अलग अलग घेरामा राखिएका उनीहरु घेराको नजिक आएर सँगै दौडिने र आराम गर्ने गर्न थाले ।
म्यासाचुसेट्सको खेतमा लुलु नामका सुँगुर बेबी नामको एउटा आँखा नदेख्ने गाईका लागि पथ प्रदर्शक बन्यो । सुँगुरले गाईलाई चर्ने ठाउँसम्म लैजान्थ्यो र कतै पनि ठोक्किनबाट बचाउँथ्यो । त्यहीँको एउटा कृषि फार्ममा हाँस र घोडाबीचको मित्रता पनि चाखलाग्दो थियो । घोडा बिरामी हुँदा हाँसले देखाएको व्यवहार झनै रोचक थियो ।
यस्ता अनेकौँ उदाहरणहरु छन् जसमा ह्वेल तथा डल्फिनले समस्यामा परेका मानिस तथा अन्य जनावरलाई सहयोग गर्दछन् ।
आखिर जनावरहरुले अन्य प्रजातिका जिवहरुको सहयोगका लागि आत्मसंरक्षणको प्रवृत्ति किन त्याग गर्दछन् ? भन्ने कुरा वास्तवमा रहस्यमय नै छ । कतिपय जनावरले चाहिँ भुलबस अन्य जनावरलाई आफ्नो ठानेको पनि पाइन्छ ।
यद्यपि जनावरहरुको मामिलामा मानवीय संवेदना लागू गर्नु खतरनाक हुनसक्छ । तरपनि केही घटनाहरुले जनावरहरुमा समेत सहानूभूति हुन्छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ ।
सुतुरमुर्ग र जेब्रालाई सँगसँगै रहेको देख्न सकिन्छ । यी दुवै सिकारी जिवहरुका लागि भोजन हुन् । सुतुरमुर्गको दृष्टिक्षमता कमजोर हुन्छ तर जेब्राले टाढा टाढासम्म देख्न सक्दछ । अर्कोतर्फ जेब्राको सुँघ्ने क्षमता कमजोर हुन्छ भने सुतुरमर्गको घ्राणशक्ति निकै बलियो हुन्छ । एक अर्काको यस्ता सबल र दुर्वल पक्षका कारणसँगै रहँदा दुवैलाई फाइदा हुन्छ र सुरक्षित हुन सहयोग पुग्दछ । यसलाई विज्ञानको भाषमा सिम्बायोसिस भनिन्छ ।
हनी बाडगर नामक जनावर र हनी गाइड नामक चराबीचको मित्रताले पनि दुवैलाई फाइदा हुन्छ ।
हनी गाइड चराले हनी बाडगरलाई भीर माहुरीको गोलोसम्म पूराइदिन्छ । त्यसपछि बाडगरले मौरीको गोलोमा आक्रमण गरेर मह खान्छ । मौरीको गोलोमा आक्रमणका बखत भुइँमा झरेका मौरीका बच्चा, फूल तथा महसमेत चराले खान पाउँदछ । हुनत हनी बाडगरले हनी गाइड चरालाई पनि आफ्नो सिकार बनाउन सक्दछ । अर्थात् यी दुई शत्रुजीव हुन् । तर दुवैको फाइदाका लागि मौरी खोज्ने र सिकार गर्ने मामिलामा यिनीहरुबीच मित्रता भएको हुन्छ ।
चरा र बिरालो साथी बन्ने कुरा कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ । तर बेलायतको सफोकस्थित खेतमा एउटा अनौठो घटना भयो । त्यहाँ एउटा बिरालोले स्यालको आाक्रमणमा घाइते भएको एक कुखुरालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्यो । बिरालोले उसलाई स्याहार सुसार तथा रेखदेख गर्‍यो र ती दुईबीच गहिरो दोस्ती कायम भयो ।
साइबेरियाको चिडियाखानामा एउटा बाघ र एउटा बाख्रोबीच अनौठो दोस्ती भयो । बाघको खोरमा उसको भोजनका लागि पठाइएको बाख्रासँग सो बाघले अकल्पनीय मित्रता कायम गर्‍यो । उक्त बाघले आफ्नो सिकारका लागि चिडियाखानले पठाएका अन्य सबै बाख्रालाई छिनभरमै झम्टिएर आहारा बनाउँथ्यो । तर त्यो एउटा बाख्रालाई भने उसले खाएन । उल्टै त्यो बाख्रा र बाघबीच गहिरो मित्रता भयो र सँगै बस्न थाले ।
बाघको यस्तो अनौठो व्यवहारका पछाडि एउटा तर्क यस्तो दिइयो कि जब सो बाख्रालाई बाघको खोरमा पठाइएको थियो त्यसबेला बाघलाई भोकको साटो एक्लोपनले सताइरहेको थियो । त्यसैले उसले बाख्रालाई मारेर खानुको साटो साथी बनायो ।
बाख्राको भाग्य बलियो मान्नुपर्दछ कि ऊ सही समयमा बाघको अगाडि पुग्न पायो ।
यो घटनाबाट यस्तो निष्कर्ष निकाल्न पनि सकिन्छ कि यदि जनावरहरुमा एउटा आवेग अर्कोमाथि हाबी भयो भने अप्रत्यासित घटना पनि हुनजान्छ ।
खाना नपाएको भन्दै क्वारेन्टिनमा बसेकाहरु आन्दोलित